भोकै नबसी वजन घटाउने हो? यसो गर्नुस् - Nepal News - Latest News from Nepal
भोकै नबसी वजन घटाउने हो? यसो गर्नुस्
By nepalnews	 On Jun 10, 2015
वजन घटाउन खाइने क्यालोरीभन्दा खर्चिने क्यालोरी बढी हुनुपर्छ। यसो गरियो भने भोकै नबसीकनै बढी क्यालोरी घटाएर स्लिम बन्न सकिन्छ। केही उपाय यस्ता छन्ः
बिहानै पानी खानुस्
पानी पिएर हरेक दिन सुरुवात गर्नुस्। बिहानै पानी पिउनाले डिहाइड्रेसन हुँदैन, जसले गर्दा भोक लागिरहेको महसुस हुँदैन।
शाकाहारी खानामा जोड दिनुस्
मांसाहारी खानामा क्यालोरी बढी हुने भएकाले बिहान र दिउँसोको खाजा र सकिन्छ भने रातिको खानामा पनि मासुजन्य परिकारको सट्टा सागसब्जी खानुस्। सागसब्जीमा क्यालोरीको मात्रा कम हुन्छ।
प्लेटको रङमा ध्यान दिनुस्
सन् २०१२ मा कोर्नेल विश्वविद्यालयले गरेको एउटा अनुसन्धानले प्लेट र खानाको रङ एउटै भएको अवस्थामा मानिसले खाना बढी मात्रामा उपभोग गरेको पाइएको थियो। त्यही भएर थोरै खाने मन भए खाना र प्लेटको कलर भिन्न होस् भन्नेमा जोड दिनुस्। सलाद आदिमा क्यालोरी कम हुने भएकाले हरियो प्लेटमा हरियो सलाद खाने गर्नुस्। किनकि, यसो गर्दा सलाद बढी खाइन्छ। यसबाट भोक पनि मेटिन्छ, ज्यान पनि लाग्दैन।
मधुरो बत्ती र संगीतमा खानुस्
मधुरो बत्ती र मधुरो संगीतमा मानिसले बिस्तारै खाने गर्छ भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ। समय लगाएर खाना खाइयो भने थोरै खाइन्छ। त्यही भएर खाने बेलामा मधुरो बत्ती र संगीतको जोहो गर्नुस्।
खाँदा बढी चपाउनुस्
बढी चपाएर खाना खान बढी समय लाग्छ। बढी समय लगाएर खाना खायो भने खानाको मात्रा घट्छ। त्यही भएर खूब चपाएर खाने गर्नुस्। चम्चाले खाने गर्नुभएको छ भने एक चम्चा खाना मुखमा हालिसकेपछि चम्चा प्लेटमा राख्नुस्। चम्चा हातमै राखियो भने छिटो–छिटो खाइन्छ ।
ताछ्ने, छोडाउने खानामा जोड दिनुस्
सुन्तला, केरा, ओखर, बदामजस्ता छोडाएर अथवा ताछेर खाने खानामा बढी जोड दिनुस्। ताछ्ने र छोडाउने गर्न बढी समय लाग्छ, जसले गर्दा यस्ता खाना थोरै मात्र खाइन्छ। ताछेर खाने फलफूलभन्दा नताछी खाने फलफूल बढी खाइन्छ भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ।
चिप्स, चाउचाउजस्ता जंक फुट प्याकेटबाट सीधै खाने नगर्नुस् । किनकि, प्याकेटबाट सीधै खान थालियो भने बढी खाएको पत्तै हुँदैन। त्यही भएर जंक फुड किन्नुभएको छ भने स–साना प्याकेटमा यसलाई विभाजन गर्नुस् र हरेक पटक खाँदा प्याकेटबाट प्लेटमा झारेर खानुस्। यसो गर्दा कम खाइन्छ।
खानाअघि सुप खानुस्
सन् २००७ मा गरिएको एउटा अनुसन्धानले खानाअघि एपेटाइजरका रूपमा सुप खानाले क्यालोरी इनटेक २० प्रतिशतले कम हुने पत्ता लगाएको थियो। त्यही भएर क्यालोरीको खपत घटाउनुछ भने खाना खानुअघि भेजिटेबल सुप खाने गर्नुस्।
खाने बेला अन्त ध्यान नदिनुस्
भोजन गर्दा टीभी बन्द गर्नुस्, छेउमा मोबाइल नराख्नुस्। किनकि, यस्ता सामग्रीले खाइरहेको बेलामा तपाईंको ध्यान भंग गरिदिन्छन्। खाने बेलामा टीभी, मोबाइल आदिमा ध्यान गयो भने खाना बढी खाइन्छ भन्ने तथ्य विभिन्न अनुसन्धानमार्फत पत्ता लागिसकेको छ।
डाडुपन्यू र चम्चा सानो लिनुस्
डाडुपन्यू र चम्चा सानो छ भने प्लेटमा खाना कम हालिने र कम नै खाने गरिन्छ भन्ने पुष्टि विभिन्न अध्ययनले गरिसकेकाले भोजनको मात्रा घटाउनाले डाडुपन्यू र चम्चाको आकार पनि घटाउनुपर्छ।
सम्बन्ध जोगाउनका निम्ति
पाँच कारण, जसले सम्बन्धको हत्य गर्छ
सम्बन्धको अवसान स्वतः हुँदैन। सम्बन्धको अन्त्य गर्ने केही यस्ता तत्व हुन्छन्, जसबारे सुरुमै जानकार र सचेत रहन सकियो भने सम्बन्धलाई अझ फलाउन, फुलाउन र उल्लासमय बनाउन सकिन्छ।
तपाईंको रबैया र सोच कस्तो मान्यताबाट अभिप्रेरित हुन्छ भन्ने कुराले सम्बन्धमा ज्यादै ठूलो प्रभाव पार्छ। तपाईंको रबैया र सोच समानतामा आधारित हुनुपर्छ। पार्टनरले आफूप्रति जस्तो सोच राखोस् भन्ने तपाईं चाहनुहुन्छ, त्यस्तै सोच अथवा रबैया ऊप्रति राख्नुभएन भने सम्बन्ध जुनसुकै बेला धरापमा पर्न सक्छ।
सोच राम्रो भएर मात्र हुँदैन, व्यवहार पनि तदनुरूप हुनुपर्छ। पार्टनरलाई मान्छे नगन्ने, उसको मर्यादाको कुनै ख्याल नराख्ने, सधँै उसलाई तल पारेर आफू माथि हुन खोज्नेजस्ता व्यवहार गर्नुभयो भने सम्बन्ध स्थिर रहन सक्दैन। तपाईंको व्यवहार समानतामा आधारित, मिलनसार र परस्पर हुनुपर्छ। अनि मात्रै सम्बन्ध स्थिर र सुखमय बन्छ।
शास्त्रहरूले पनि अहम्लाई मानिसको मुख्य शत्रुमध्ये एक मानेका छन्। सम्बन्धको मुख्य शत्रुमध्ये अहम् पनि एक हो। म ठूलो हुँ, बढी कमाउँछु, मेरो परिवार राम्रो छ, पढाइ राम्रो छ जस्ता कुरा सोचेर यसलाई पार्टनरसँगको सम्बन्धमा झल्काउनुभयो भने सम्बन्ध ढिलोचाँडो टुट्ने पक्का छ। …म’लाई भन्दा पनि …हामी’लाई प्राथमिकता दिन सकियो भने सम्बन्ध कहिल्यै संकटमा पर्दैन।
पार्टनरप्रति राम्रो चिताउने गर्नुभएको छ, बडो प्रेम गर्ने गर्नुभएको छ भने पनि बलियो सम्बन्धका लागि यो पर्याप्त हुँदैन। मनमा प्रेम महसुस गरेर मात्र पुग्दैन, यसलाई समय–समयमा अभिव्यक्त पनि गर्नुपर्छ। प्रेम अभिव्यक्त गर्न अरू केही गर्नुपर्दैन, बेवास्ता नगरे पुग्छ। बेवास्ता नगर्न ठूलो काम गर्नै पर्दैन, पार्टनरको सञ्चोबिसञ्चो सोध्ने, फुर्सद मिल्नासाथ फोन गर्ने, सन्दर्भ पारेर …आई लभ यू’ भन्ने, कहिलेकाहीँ घुमाउन अथवा बाहिर खाना खान लैजाने, पार्टनर चिन्ताग्रस्त अवस्थामा छ भन्ने थाहा भएमा उसलाई साथ दिने आदि गर्नुपर्छ। समग्रमा उसलाई मेरो चिन्ता लिने कोही छ भन्ने महसुस गराउन सकियो भने सम्बन्ध बलियो बन्छ।
सम्बन्धको अर्को ठूलो शत्रु हो, स्वार्थ। कसैकसैले कुनै गुप्त स्वार्थ पूर्तिका लागि कसैसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन्। जस्तो कि, पार्टनरको सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा अथवा शारीरिक सन्तुष्टि लिने स्वार्थ। पार्टनरको बलियो पक्षलाई आपसी हितको निम्ति उपयोग गर्न खोज्नुले सम्बन्धलाई उल्टो अझ बलियो बनाउँदै लान्छ। तर, पार्टनरको सबल पक्षबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने गुप्त अभिप्राय पार्टनरलाई थाहा भएको खण्डमा यसले सम्बन्धलाई पूर्णविराम लगाउने निश्चितप्रायः छ।
कुन महिनामा जन्मेका महिलाको स्वभाब कस्तो हुन्छ ? थाहा पाइराखौ
झापा मोरङ र सुनसरी आठौं प्रदेश हुन सक्छ : वर्षमान ८ प्रदेशको ‘राजनीतिक इञ्जिनियरिङ’ बारे अलमल